Oppo A92S bụ ọrụ: ekwentị 5G ọhụrụ na Dimensity 800 processor | Gam akporosis
Oppo Ọ na-ewere mwepụta nke ọhụrụ igwe na mkpa ọdịda atụmatụ na ya home turf nnọọ kpọrọ ihe. Onye nrụpụta bụ otu n'ime ụdị ndị toro eto na afọ gara aga ma chọọ ịnọgide na-enwe ọnọdụ ahụ n'Eshia n'echefughị ​​mgbasawanye nke ahịa ndị ọzọ.
Oppo kwuputara ọkwa A92S, smartphone nke anyị marala ọtụtụ nkọwa, otu n'ime ha bụ ngosipụta na ọnụego ume nke 120 Hz. Ha kpughere ha n'oge na-adịbeghị anya dị na agba ọnụ na ọtụtụ oyiyi na-leaked tupu ụlọ ọrụ eweta gị.
1 Oppo A92S, njirimara ya niile
Oppo A92S, njirimara ya niile
El Oppo A92S bụ ngwaọrụ 5GỌ ga-abata na ihe nhazi 800 Dimensity 2 site na Dimensity, nzọ ahụ ga-abụ SoC dị ike ma dị ike, ebe ọ bụ mgbawa 8 GHz na 6 cores. Ọnụ ya nwere nhọrọ nchekwa abụọ, 8 ma ọ bụ 128 GB nke Ram na XNUMX GB nke nchekwa na ohere nke ịgbasa site na oghere MicroSD.
Ihuenyo bụ 6,57-inch IPS LCD na mkpebi HD zuru oke + na ọnụego ume ọhụrụ nke 120 Hz ma kwe nkwa nha 90% nke ahụ. Na ihu nke ngwaọrụ ahụ ị nwere ike ịhụ nhụjuanya nwere ihe mmetụta abụọ, selfie bụ 16 megapixels ma nwee enyemaka site na otu 2 megapixels miri emi.
Ugbua na azụ dị ngụkọta nke ihe mmetụta anọ gụnyere, onye bụ isi bụ 48 MP, igwefoto igwe na MPN 8 MP, ihe mmetụta miri emi nke 2 MP na nnukwu MP 2. Batrị dị gburugburu 4.000 mAh na 20W ngwa ngwa, sistemụ arụmọrụ bụ gam akporo 10 na ColorOS 7 site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
IKIRU 6.57-anụ ọhịa IPS LCD na Full HD + mkpebi (2.400 x 1.080 pikselụ)
Nhazi 800-isi MediaTek Dimensity 8 (4x Cortex-A76 na 2 GHz na 4x Cortex-A55 na 2.0 GHz)
Ohere TERLỌ N'IME 128 GB na oghere MicroSD
Ndị isi Onye isi ihe ngosi 48 MP nwere oghere f / 1.7 + 8 MP ultra wide-wide sensor + 2 MP omimi sensor + 2 MP macro sensor
UMUAKA 3.890 mAh na 20W ngwa ngwa
OS Gam akporo 10 na ColorOS 7
Njikọ 5G + Bluetooth + WiFi + NFC
Atụmatụ ndị ọzọ Mkpisiaka agụ n'okpuru ihuenyo
Oppo A92S dị ugbu a maka iwu maka ego nke 285 euro maka ụdị 6/128 GB wee gaa euro 321 ma ọ bụrụ na ịchọrọ ụdị 8/128 GB. A na-enweta ya na agba abụọ dị: Black na White.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Oppo A92S bụ ọrụ: ekwentị 5G ọhụrụ nwere ihe nhazi 800 dị ukwuu
WhatsApp ga-ebuli njedebe nke ndị ọrụ na oku vidiyo karịa anọ